Maxaan ka arki karnaa WWDC ee sannadkan sida ku xusan xanta illaa iyo hadda? | Waxaan ka socdaa mac
Maxaan ka arki karnaa WWDC ee sannadkan sida ku xusan xanta illaa iyo hadda?
Apple ayaa horay u shaacisay dhacdada WWDC ee sanadkan. Waxay noqon doontaa Juun 7 iyo markale iyo sababta oo ah COVID waa inaan si caadi ah u aragnaa. In kasta oo la dhaho gudbinta, dad badan ayaa doorbiday daabacaadda dalwaddii ah tan fool-ka-fool ka ah. Dabcan, waxaad lumineysaa diirimaadka aadanaha iyo farxadda iyo sacabbada had iyo jeer ka buuxsama Apple Park nolosha. Maxaan arki karnaa 7-da Juun ee soo socota? Xanta waxay saadaalineysaa in waxaas oo dhami ay noqon doonaan.
Dabcan, waxaan fursad u heli doonnaa inaan ku aragno barnaamijyada softiweer ee WWDC. Waxay u badan tahay inaan arki doono ku dhawaaqida iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 iyo tvOS 15. Sidoo kale waxay u badan tahay inaan arki doono noocyo beta cusub oo ah nidaamyada hawlgalka.
Waxaan arki karnaa qalabka. Gaar ahaan loogu talagalay horumarinta. Shirkaddu waxay ku jirtaa ka-guuritaanka khadka Mac, dhammaantood waa inay lahaadaan processor-rada Apple Silicon sida ugu dhakhsaha badan, sidaa darteed wararka la isla dhexmarayo waxay tilmaamayaan inaan awoodno inaan aragno kuwa cusub sida ugu dhakhsaha badan. iMacs y Macmiil Macalin. Xanta ku saabsan moodooyinkan cusubi waa kuwo aad u xoogan, sidaa darteed waxaan u maleyneynaa in shirkadda Californian haa waxay bulshada u soo bandhigi doontaa kombuyuutar cusub oo leh M1.
Ogeysiiska waxaa lagu sameeyay sawirrada emojis oo daawanaya jadwalka taariikhda 7-da Juun ee Mac. Durba waxaa lagu xantaa suurtagalnimada in muraayadaha tufaaxa noqon karaa lagu soo bandhigo bulshada soo socota 7. Xitaa headets xaqiiqada isku qasan.
Sidoo kale waa suurtagal in lagu arko barnaamijka Xcode ee muraayadaha indhaha, taas oo macno samaynaysa sababo la xiriira diiradda horumariyaha WWDC sanad walba. Sidoo kale waa suurtagal in la arko astaanta dalabka iyo Calaamadaha SF. Astaamaha bidix ee bidix ayaa u muuqda inuu yahay SpritekitIn kasta oo ay sidoo kale noqon karto barnaamijka Transporter, oo ay horumariyayaashu u isticmaali karaan inay barnaamijyadooda ugu soo rogaan App Store Connect
Sida aad u aragto warar badan oo xan yar inyar way sii xoogaysan doonaan maadaama ay soo dhawaatay taariikhda WWDC
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Maxaan ka arki karnaa WWDC ee sannadkan sida ku xusan xanta illaa iyo hadda?